🥇 ▷ - or Sharafta laaluushka qaatay ee 20 SE ayaa daaha ka qaaday faahfaahinteeda TENAA »- ✅
– or Sharafta laaluushka qaatay ee 20 SE ayaa daaha ka qaaday faahfaahinteeda TENAA »-
Maamuus diyaarso taleefano cusub oo leh nambarka moodelka YAL-AL50 / YAL-TL50 Soo dhowaada. Wuxuu u muuqdaa inuu xubin ka noqon doono oo ka socda taxanaha Sharafta 20 maadaama nambarkiisa nambarkiisu yahay iyo waxyaabaha lagu cayimay ay u egyihiin midka Sharafta 20 (YAL-AL10). Maamuuska YAL-AL50 / TL50 wuxuu umuuqdaa mid a nooca waxoogaa hoos u dhigay sumcadiisa. Warar xan ah ayaa soo jeedinaya inay noqon karto Sharafta 20 SE oo dhowaan la soo bandhigi doono.
Liisaska sharafta leh ee YAL-AL50 / TL50 TENAA waxaa ka maqan sawirro taleefan. Qalabka wuxuu leeyahay cabbir jireed oo ah 154.25 x 73.97 x 7.87 mm waana miisaan 172 garaam. Taleefoonka casriga ah waxaa lagu qalabeeyay a Shaashadda 6.26 inji kaas oo bixiya qaraar HD + 1080 x 2340 pixels oo buuxa.
Sida processor-ka, waxaa ku jira a sideed-core chipset xawaare saacad ah 2.6GHz Kala duwanaanshaheeda RAM waa 6 GB, 8 GB iyo 12 GB. Telefoonka qarsoon wuxuu yeelan doonaa moodooyin kayd ah oo gudaha ah 128 GB iyo 256 GB. Waan fulin doonaa Android 9 Pie sida nidaamka hawlgalka lakabka ka hooseeya EMUI Huawei. Leh a durbaan Magacaabista ugu yar ee 3,650 mAh awoodda; awooddeeda caadiga ahi waxay noqon lahayd 3,750 mAh. Bateriga ayaa la jaan qaadaya lacag deg deg ah. Muuqashadeeda liistada 3C hay’ad bishii la soo dhaafay ayaa shaaca ka qaaday inay la imaan karto iyada oo lagu taageerayo a Lacag deg deg ah ilaa 20W.
Maamuuska YAL-AL50 / TL50 wuxuu leeyahay qaabeyn kamarad saddex-geesood ah gadaal. Waxay ka kooban tahay lens weyn ee 48 megapixels, aaladda dareenka 8 megapixels iyo lens of 2 megapixels. Si aad u qaadato nafta, waxay leedahay 32 megapixel camera hore. Daboolka dambe ee taleefanka wuxuu leeyahay a akhristaha faraha.
Sharaxaadda iyo cabirka sharafta YAL-AL50 / TL50 waxay u dhowdahay inay la mid yihiin kuwa Mudane 20. Farqiga weyn ee kaliya ee jira ayaa ah, bedelkii qaabeynta qarniga ‘Quad camera’ oo laga helay Sharafta 20, aaladda cusub ee la helay Waxay leedahay nidaam kamarad saddex-geesood ah. Intaa waxaa u dheer, Maamuuska 20 wuxuu taageerayaa xukun deg deg ah oo ah illaa 22.5W, halka YAL-AL50 / TL50 uu imaan karo iyadoo la raacayo 20W oo ah kaalmo degdeg ah. Qalabka processor-ka 2.6GHz ee awoodaya taleefanka YAL-AL50 / TL50 waxay noqon kartaa Kirin 980 chipset kaas oo sidoo kale awood u leh taleefanka Honor 20.
Toddobaadkii la soo dhaafay, waxaa la shaaciyey sawir qarsoon oo sawir leh imaatinka Hon 20 20 dukaan jireed oo kuyaala Shiinaha. Ma uusan sheegin wax macluumaad ah oo ku saabsan faahfaahinta taleefanka. Si kastaba ha noqotee, wuxuu soo jeediyay in Honor uu isku diyaarinayo inuu ku daro taleefan cusub taleefanka Honor 20 taxanaha. Waxaan rajeyneynaa, shirkadda ayaa ka dhigi karta mid rasmi ah bisha soo socota.
Xigasho: 1, 2